Conflict Resolution / Xallinta Khilaafaadka
Waxaan isbeddelo ku sameynay hanaannada PPS ee wax looga qabto tabashooyinka iyo cabashooyinka
Sannad dugsiyeedkii la soo dhaafay, waxaan qiimeynay oo aan eegmo ku sameynay qaabka ugu habboon uguna waxtarka badan ee aan kaga caawin karno qoysaska xallinta su'aalaha ama tabashooyinka, labadaba heerarka dugsiga iyo degmada. Iyada oo qayb ka ah kala-guurka, waxaan ka baxnay booska Ombudsman-ka degmada.
PPS waxaa ka go'an dhagaysiga iyo aqoonsashada meelaha ay ka jiraan tabshooyinka iyo dariiqooyinka ku habboon ee xallinta. Hoos waxaa ku yaal ururiska macluumaadka loogu talagalay ardayda iyo qoysaska si looga caawiyo xallinta khilaafaadka ka jira Portland Public Schools.
Ficillada ugu wanaagsan ee lagu xaliyo khilaafaadka ka dhaca dugsiga
Inta lagu jiro sannad dugsiyeedka, arrimo iyo/ama tabasho ayaa laga yaabaa inay ku soo baxdo qoysaska la xiriira iskuulada ama fasalada ardaydooda. Waxqabadka ugu wanaagsan ee la isku dayga xallinta arrimaha marka hore waa heerka dugsiga, laga bilaabo macallinka fasalka. Hoos waxaa ah habka arrimaha loo dallacsiin karo.
Habka Dhalacsiinta Xallinta Khilaafaadka
Portland Public Schools wuxuu aaminsanyahay habka ugu fiican uguna waxtarka badan ee xalinta khilaafaadka ay tahay in laga bilaabo macalinka fasalka.
Maamulahaaga iyo/ama Maareeyaha iskuulka
Haddii la xiriiridda macalinkaaga xalin waydo arinta, waxaa lagu talinayaa in qoysaska ay la xiriiraan maamulaha ama maareeyaha iskuulka hadana.
Kormeerahaaga Maamulaha (Agaasimaha Sare ee Goobta)
Haddii aad la xiriiridda maamulahaaga ama maareeyaha iskuulka aynana dhalin natiijooyin lagu qanco, qoysaska waxaa lagu soo dhaweynayaa inay la xiriiraan kormeeraha maamulaha. Jagooyinkaan waxaa loo yaqaanaa Agaasimeyaasha Sare ee Deegaanka waxaana habeeya aag diiwaangelinta dugsiga sare. Liiska Agaasimayaasha Sare ee Aagga iyo iskuullada ay maamulaan ayaa laga heli karaa halkan.
Saddexda Kormeero-Guud Goboleedyo ee kormeerayo Agaasimeyaasha Sare ee Aagga iyo kooxahoodu waxay ku qoran yihiin lifaaqa shaqaalaha ee kor lagu soo sheegay. Haddii arrintaada aan lagu xalinin la shaqeyta Agaasimaha Sare ee Aagga waxaad la xiriiri kartaa Kormeero-Guud Goboleedka ee halkaan ku qoran.
kormeerayaasha guud ee gobolada waxaa kormeera gudoomiyaha iskuulka. Duruufaha qaar ee marka talaabooyinka kor lagu soo xusay aynan xalinin arimaha qoyska, Gudoomiyaha iskuulada, Dr. Shawn Bird ayaa lala xiriiri karaa.
Kuxigeenka Kormeeraha Guud ee Waxbarida iyo Bulshada Iskuulka
Gudoomiyaha iskuullada wuxuu warbixin siiyaa kuxigeenka kormeeraha waxbarashada iyo bulshada iskuulka, Dr. Kregg Cuellar.
Tabashada iyo arrimaha waxbarashada gaarka
Dhibaatooyinka iyo tabashooyinka la xiriira fasalada waxbarashada gaarka ah, waxbaridda iyo adeegyada waxaa lagu xallin karaa iyadoo lala xiriiraya Noelle Sisk, Khabiirka Kaqeybgalka Qoyska ee PPS iimaylka nsisk@pps.net ama 503-916-3723.
Tabashooyinka iyo arrimaha Iskuulka Jaatarka (Charter School)
la xiriir maamulayaasha iskuulada jaatarka wixii tabasho ama arrimo ah.
Cabashooyinka Rasmiga ah iyo Kuwa Qarsoodiga ah
Nidaamka Cabashada Rasmiga ah
Marka loo eego Xeerka Maamulka Oregon ee 581-022-2370 iyo Xeerka Dacwada Rasmi ah, Portland Public Schools waxay qoysaska siisaa nidaam ay ku xeraystaan cabasho rasmi ah oo la xiriirta iskuulka, waxbaridda ama arrimaha fasalka. Nidaamka Cabashada Rasmi ah gudaheeda waxaa ah macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida loo xareeyo cabasho rasmi ah si taleefan, emayl, ama foomka khadka tooska ah. Xusuusin: Go'aannada ku saabsan shaqada ama edbinta shaqaalaha ma aha qayb ka mid ah nidaamka cabashooyinka rasmiga ah; PPS inta badan waa laga mamnuucay shaacinta macluumaad gaar ah oo ku saabsan talaabada edbinta ee laga qaadayo shaqaalaha ku lug leh cabashada ee Caawinaad iyo kheyraad, kala xiriir Isku-Duwaha cabashooyinka PPS Lidia Lopez Gamboa oo laga helo llopez@pps.net ama 503-916-3354.
Cabashooyinka Qarsoodiga ah
PPS waxay aqbashaa cabashooyin sir ah, cabashooyinka qarsoon iaydoo la adeegsanayo taleefanka 503-916-3462 ama iimaylka anonymouscomplaints@pps.net.
Oregon ammaanah (SafeOregon)
SafeOregon waa barnaamij loo sameeyay ardayda, waalidiinta, shaqaalaha iskuulka, xubnaha bulshada ee Oregon iyo saraakiisha fulinta sharciga si ay u soo sheegaan ugana jawaabaan halista amaanka ardayda. Dhammaan fariimaha waxay isla markiiba u tagayaan farsamo yaqaanka fariimaha 24x7x365. Fariimaha si dhakhso leh ayaa loo falanqeyn looguna gudbiyaa shaqaalaha loo qoondeeyay ee ka bixin kara caawimaad dheeri ah xallinta dhacdooyinka la soo sheegay. Uga warbixi SafeOregon arrinta.
Kheyraadka kale ee loogu talagalay ardayda iyo qoysaska Waaxda iskaashiga istiraatiijiyadeed iyo la hawlagalidda ee Portland Public Schools
waxay gacan ka geysan kartaa cabashooyinka iyo arrimaha isbadajoogga ah ee saamaynaya yo arrimaha bulshada dugsi gaar ah iyo/ama degmada oo dhan. La Xiriiri Agaasimaha La hawgalka Bulshada ee Shanice Clarke kalana xiriir sclarke@pps.net.